MSGySV Panama na Latin America March - World March
Mbido » Noticias » Nkwukọrịta Ozi » MSGySV Panama na Machị Latin America
World enweghị agha na ime ihe ike Panama na -ebufe nkwupụta a na Machị Latin America
World enweghị agha na ime ihe ike Panama na -ebufe nkwupụta a na -ekerịta ihe omume emere na mpaghara 1st Latin America March maka emeghị ihe ike na ekele ya nye ndị sonyere na ndị na -emekọrịta ihe:
Ụwa na -enweghị agha na enweghị ime ihe ike, zigara ndị otu dị iche iche, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi òkù pụrụ iche, maka nrube isi ha na mmemme anyị na -ahazi n'ime usoro Latin America March of Nonviolence, nke emere na njikọ Obodo Obodo Ọmụma na obodo Clayton, Panama City, na -echeta n'otu ụzọ ahụ, ụbọchị udo mba ụwa na Septemba 21 na ụbọchị enweghị ike na October 02, 2021.
Ndị ntorobịa Panama sonyere na mmemme nke ụwa na -eme n'enweghị agha na enweghị ime ihe ike Panama, na -eme ememme Latin America March, maka nkwado nke Obodo Ihe Ọmụma na Soka Gakkai site na Panama, onye sịrị ee udo na ọgbaghara na mba anyị.
Na -ejigide usoro nchekwa nchekwa ndụ, na Tuesday anwụ na -acha na Septemba 21, arụrụ ọrụ mbụ, onyonyo mmadụ nke akara nke udo, yana ndọpụ uche nke ndị ọchịchị Panama rịọrọ, yana nnọchite nke ndị ntorobịa. Soka Gakkai na ụmụ akwụkwọ Ụlọ akwụkwọ mmuta nke Panama maka ọdịnihu, ndị a họpụtara ndị na -eto eto ya n'etiti ndị kacha pụta ìhè site na mpaghara mba dị iche iche, maka ọmarịcha agụmakwụkwọ ha.
Na Fraịde na-enwu gbaa na Ọktoba 01, n'isi ụtụtụ, a na-ejegharị nkịtị n'ime ogige ihe ọmụma, na-echeta ndị nwụrụ ụdị ihe ike niile, yana COVID-19, na Panama na ụwa ndị ọzọ. Na ije ahụ, anyị nwere enyemaka nke ndị ọrụ afọ ofufo sitere na Panama Red Cross, ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi nke Isaac Rabin College na ndị ntorobịa sitere na nzukọ anaghị akwụ ụgwọ Buddha, Soka Gakkai si Panama.
Onye ukwe Grettel nke ọma, mere ndekọ nke mgbasa ozi redio na mgbasa ozi ihe onyonyo nke ezigara na isi ụlọ ọrụ na telivishọn nke Panama City, n'otu aka ahụ, nwa agbọghọ na -agụ egwú nyere isiokwu egwu ya: “Na -achọ Udo”, ya na ndị ọbụ abụ mere. Margarita Henríquez, Yamilka Pitre na Brenda Lao, nke akpọrọ dị ka ukwe nke Latin America March na Panama, anyị mere isiokwu nke ọdịyo, na -egosi ya na onyonyo dị iche iche nke ọrụ a na -eme na mba Latin America nke mpaghara n'oge ngagharị na ụfọdụ. nke akwụkwọ ọkwa ndị Mundo mere na -enweghị agha Panama, iji kwalite March Latin Latin; Ọ dị mkpa iburu n'uche na Mundo sin guerras Panamá mere akara ahụ ejiri mee ihe na mba niile maka ngwa ngagharị.
Iji kwalite ihe omume na Panama, a gbara ajụjụ ọnụ ndụ Grace Belquis, site na World na -enweghị agha Panama, na mgbasa ozi na -esonụ: Na Satọde, Septemba 18, n'elekere asatọ nke ụtụtụ, na mmemme redio, "N'ọnọdụ eziokwu", nke onye nta akụkọ na -edu Aquilino Ortega; Na Tuzdee, Septemba 21, n'elekere 14:00 nke ehihie, ha sonyere na mmemme redio, "Mgbede Spectacular" nke onye nta akụkọ ahụ kwadoro. Didia GallardoMmemme abụọ a bụ akụkụ nke usoro mmemme nke ụlọ ọrụ redio RPC, nke nwere mkpuchi mba. A gbara ajụjụ ọnụ na mmemme ahụ “Anyị bụ omenala 247”, Mgbasa ozi n'otu oge na ụlọ ọrụ telivishọn na ọdụ Plus, nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi na -eduzi Onye na -elekọta mmekọrịta Kristian AlveloNa Wenezdee, Septemba 29 n'elekere 21:30 nke abalị, a na -agbasakwa ajụjụ ọnụ ahụ n'otu oge site na Facebook's Plus.
Grettel nke ọma a gbakwara ajụjụ ọnụ na ngalaba ọdịbendị nke na -apụta na akụkọ Stellar nke Sertv, ọwa 11, nke onye duziri Lorraine NoriegaBanyere isiokwu egwu '' Na -achọ Udo '', nke onye ọbụ abụ dere ma mee, na dịka anyị kwuru, e debere ya dị ka ukwe nke Latin America March na Panama.
Obodo Ọmụma na Mahadum Isaac Rabin, mere mbipụta na netwọkụ mmekọrịta ha, na -agwakọta ozi ha na nke Ụwa na -enweghị agha na enweghị ime ihe ike Panama na netwọk mmekọrịta, gbasara emume ncheta ụbọchị udo na ụbọchị ọgbaghara.
Onye na -arụ ọrụ drone, Maazị Eric Sánchez, onye nyere ihe ndekọ ihe onyonyo nke ihe omume ahụ, na -arụ ọrụ abụọ a na -eme n'obodo Ihe Ọmụma, Panama, na -eji ngwa na oge nke ya kpuchie ihe omume ndị a kpọtụrụ aha. Ndị otu nke ụwa na -enweghị agha na enweghị ime ihe ike, anyị nwere obi ụtọ site na ntinye aka nke ndị ntorobịa Panamania na mmemme a na -eme n'obodo Ihe Ọmụma, anyị nwere obi ụtọ ịmara na ndị okenye ga -eme n'ọdịnihu na udo na enweghị ike na obodo anyị.
Ide: Grace Belquis, Ụwa na -enweghị agha na enweghị ime ihe ike Panama.